Xildhibaan ah Wasiir oo beeniyey iney Jubbaland caburiso Baarlamaankeeda – Kalfadhi
Xildhibaan ka tirsan Guddiga Anshaxa Baarlamanaka Jubbaland, Geelle Maxamed Aadan, oo sidoo kale ah Wasiirka Beeraha Xukumadda Jubbaland, ayaa beeniyey wararka sheegaya inuu Maamulka Axmed Madoobe caburiyo Xildhibaannada Baarlamaanka Jubbaland.
Kalfadhi ayuu u sheegay in aysan jirin wax dhib ah oo ay Baarlamaanka deegaankaas kala kulmaan Hay’adda Fulinta Jubbaland, cabashada qaar ka mid ah Xildhibaanada jubbaland-na ay tahay warar aan xaqiiqda ku saleysneyn, sida uu hadalka u dhigay. Xildhibaan Geelle waxa uu sheegay in Xildhibaannada Baarlamaanka Jubbaland ay xor u yihiin iney cabiraan aragtidooda siyaasadeed.
“Jubbaland xornimaa ka jirta. Dal nabad ah, dad nabad ah, baarlamaan nabad ah iyo hay’ado kala madax-banaan ayaa ka jira Jubbaland” yuu Xildhibaan Geelle ku yiri Kalfadhi. Waxa uu sheegay in ay Wakiillada Baarlamaanka Deegaankaas ka hadli karaan aragtidooda ku saabsan xeerarka iyo sharciyada la horkeeno, “iyadoo aysan jirin” buu yiri “wax cabsi ah oo ay ka qabaan Xukuumadda iyo Madaxtooyada”.
“Darruufta ay sheegeen saaxiibbadey kama jirto Jubbaland. Waa rag la soo isticmaalay, umana baahna dalkaan shaqsiyaad bur-burinta Jubbaland loo isticmaalo” ayuu hadalkiisa raaciyay Xildhibaan Geelle. Waxa uu sheegay in Maamulka Jubbaland uu ka soo kabanayo dhibaatada ka jirta Soomaaliya, maantana uu ka mid yahay maamulada ugu wanaagsan dalka, sida uu hadalka u dhigay.
Xildhibaannada Cabashada qaba ayuu ku eedeeyay in aysan ka fekereyn daganaanshiyaha Jubbaland, isagoo carrabka ku adkeeyay in la soo adeegsaday Xubnahaasi, sida uu hadalka u dhigay. “Baarlamaanka Jubbaland, waa xor. Waxa uu leeyahay dastuur; wixii laga waayana Dastuurkii Qaranka ee lixdankii ayaa dib loogu laabtaa” ayuu markale Xildhibaan Geele ku yiri Kalfadhi. “Dowladda Jubbaland waxay Baarlamaanka u sameysay wax aysan maamulada kale u sameynin, oo mudan in lagu amaano” ayuu hadalkiisa sii raaciyay.
Xildhibaan Geelle Maxamed Aadan waxa uu Xukumadda Jubbaland ku amaanay iney aad uga fekertay guud ahaan amaanka Kismaayo, gaar ahaan kan Xubnaha Baarlamaanka Maamulkaas. “Xildhibaan kasta oo Jubbaland ah waxaa la siiyay bastoolad cusub iyo rasaas, waxaana laga difaacay oo laga ilaaliyay Al-shabaab- cabsi la’aan ayuu ku nool yahay” ayuu yiri Geelle.
Kalfadhi ayaa weydiisay Geelle, waxa uu ku beenin karo in Xildhibaanno qaarkood la hadlay Kalfadhi ay sheegteen iney uga soo carareen Kismaayo markii uu Maamulka Axmed Madoobe u hanjabay, kadib markii ay dood ka keeneen, oo ay ka aragti dhiibteen, Hindise Sharciyeedkii ugu dambeeyay ee Baarlamaanka Jubbaland la horkeenay ee Guddiga Xuduudaha iyo Doorashooyinka Jubbaland, iyagoo waliba Xildhibaannimadoodii la laalay.
“Doodaas waa jirtay; Xildhibaano dhowr ah oo gaaraya afar ama saddex ayaa ka soo horjeestay, waana laga cod badiyay. Inta badan Xildhibaannadii fadhiyay ayaa HAA u wada codeeyay” ayuu Xildhibaan Geelle uga jawaabay su’sshaas. “Haddii laga cod badiyay maahan in loo caga jugleeyay iyo in la caburiyay” ayuu hadalkiisa sii raaciyey. Caado ay leeyihiin Xildhibaannada Soomaaliyeed ayuu ku tulmaamay in marka laga codbadiyo ay wax dacaayadeeyaan.
Xildhibaan Maxamed Nuur (Dhaayow) ayaa dhawaan Kalfadhi u sheegay in aysan xor u ahayn cabirka iyo soo bandhigidda aragtidooda ku saabsan Ajandayaasha Baarlamaanka Jubbaland, isagoo sidoo kale sheegay iney jirto caburin iyo cabsi gelin ay kala kulmayaan Xukuumadda Jubbaland.
Sidoo kale, Qadiijo Cali Aadan (Kuweyd) ayaa maalmo ka hor Kalfadhi u sheegtay iney nafteeda kala soo baxsatay magaalada Kismaayo, kadib markii, sida ay sheegatay, ay u hanjabeen masuuliyiin ka tirsan Madaxtooyada Jubbaland iyo Odayaasha Beesheeda, waxaana sida ay sheegtay arrintaas u sabab ah iney aragtideeda ku diiday dib-u-eegista Hindisaha Guddiga Xuduudaha ee Jubbaland, iyadoo ay markii dambe ka war heshay in la mamnuucay Xildhibaannimadeedii.
Madaxweynaha Puntland oo la kulmay Madaxda Wasaaradda Maaliyadda Maamulkiisa